UKUTSHATA EKUBONWENI KOKUQALA KUKANEIL BOWLUS OMANGALISWE NGUSAM - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato Utshatile ekuboneni kokuqala kukaNeil Bowlus: Emangaliswe ngu-Sam's Emphatic Reaction
Utshatile ekuboneni kokuqala kukaNeil Bowlus: Emangaliswe ngu-Sam's Emphatic Reaction
Ukutshata ekubonweni kokuqala kukaNeil Bowlus uthetha kwiKnot malunga nobomi bomtshato noSam Role. Ityala: ngoncedo lwe-FYI
Ngu: Kelly Spears 12/22/2015 ngo-8: 30 AM
Inkqubo ye- Ukutshata ekuboneni kokuqala Inkqubo ibonakalisa ukuba isivunguvungu esineemvakalelo kwisizini ye3 izibini. Ngelixa omnye umdlalo ubonakala ngathi uwela kudibaniso lothando olukhawulezayo nolunomsindo, abanye ababini banokuthi batyikitywe kwimeko yokuba ayinguye kuwe.
UNeil Bowlus, ingcali yeminyaka engama-31 yokuthotyelwa komthetho, wayethelekiswa noSamantha Role, umphathi webhanki oneminyaka engama-30 ubudala, kwaye ngelixa ababukeli bengenako ukubanceda kodwa babathande bobabini, asiqinisekanga ukuba ulonwabo lomtshato lukamva labo. Kudliwanondlebe olukhethekileyo kunye neLizapourunemerenbleus, u-Bowlus wavula malunga nenkqubo yomdlalo, indlela awothuka ngayo umfazi wakhe kuye kunye ne-bond eqhelekileyo abelana ngayo.
Ndothuswe yindlela indlela awasabela ngayo egxininisa, umyeni omtsha waveza ukuba uRole uyamamkela ukuba akazange amtsalele ngokwasemzimbeni, kodwa ndakuxabisa ukunyaniseka nokungafihli nto. UB Bowlus wayengakulungelanga ukuyibiza iyeke emva kwencoko enzima. Kwakungeyona imeko efanelekileyo, wavuma, kodwa bubuhle bokwazi umntu othile, unganomdla ongaphezulu komphefumlo kunokubonakala nje.
Ukuhlekisa kudlale indima ebalulekileyo kumhla womtshato womtshato, kwaye kwaqhubeka nobusuku babo bokuqala kunye, xa uB Bowlus ejija izinto zakhe kwi-onesie ebomvu enamagama, icephe elikhulu, esifubeni. Ngomtshato wothando, umyeni wayeneepuni ezimbini wazisa umtshakazi wakhe phambi komsitho womtshato, kwaye kubonakala ngathi icebo lakhe yayikukuqhubeka nomxholo kwiholide yasemva komtshato. Ewe, ngokudibeneyo nesipho samacephe ngomhla womtshato, bekukho nengwe eprintwayo ye-onesie kaSam ene-'Spoon encinci 'kuyo, uBowlus uxelele i-Knot xa ebuzwa ukuba ikhona na inguqulelo elingana no-Sam yengubo eyodwa. Eyakhe nayo ine hood eneendlebe kwaye ndinomona kancinci, wahleka.
Batshatile kwi-First Sight uSam Role noNeil Bowlus ngosuku lwabo lomtshato. Ityala: L. Hunter Photography
Nangona unxibelelwano lothando lwalungabonakali kwangoko, uB Bowlus noRole babelana ngothando loburharha, olwavumela ukuba badlule kumhla wabo womtshato. Ubuntu bethu obungenangqondo buhlala kakuhle, uB Bowlus uyakhumbula. Sidlala uburharha bomnye nomnye kwaye iyasinceda ukuba sonwabe kolu seto lungaqhelekanga.
Ngelishwa, uburharha abukwazanga ukuthwala esi sibini ngeholide yabo yasemva komtshato. UBowlus wayesazi ukuba intliziyo yomfazi wakhe yayingekho kuyo. Nangona mna noSam besisazana, uBowlus wabelana, ithoni yakhe, ukunyusa, kunye nolwimi lomzimba konke kwathiwa wayengekho kuloo mzuzu. Umyeni wayesazi ukuba iNdima yayihamba nje. Unxibelelwano lwakhe olungathethi ngomlomo aluhambelani namazwi akhe, wakhumbula. Kwaye yile nto ndiyicholileyo.
Inkxalabo enkulu uB Bowlus wayenayo yokufumana umhlaba oqhelekileyo kwiholide yomtshato, ngaphambi kokuba abuyele kwimpilo yemihla ngemihla. Ukwenza unxibelelwano yayiyeyona nkxalabo inkulu bendibuya nayo emva komtshato, umyeni uvumile. Ngaphandle komanyano olomeleleyo, isiseko sethu sibuthathaka kwaye kunzima ukwakha kuso. Kwakubalulekile kum ukuba sithathe ixesha lokwazana ngcono, siziva sikhululekile kwaye, ekugqibeleni sihambisa umtshato ngendlela elungileyo.
Enye indlela i Ukutshata ekuboneni kokuqala Iingcali zichonge ukuba ngabaphi abaviwa abaza kutshatiswa kukufumanisa ukuba ubuntu babo buza kusebenza njani kunye. Ubuntu bam bugciniwe kwaye ndikhetha ukujonga kunokuba ibe sisiseko sokuqwalaselwa, ngakumbi xa ndidibana nabantu abatsha okanye kwindawo entsha, uB Bowlus uxelele iLizapourunemerenbleus ngokubhekisele kukwahluka kubuntu bakhe kunye neRole's. Ubuntu bukaSam buvulekile kwaye buphandle ukuze ubone ngaphakathi komzuzu odibana naye. Siyaphelelisana kule nkalo kwaye ndiyabona ukuba kutheni iingcali zisihambisile.
USam Role kunye noNeil Bowlus babelana ngokuhleka xa Betshatile ekuboneni kokuqala. Ityala: ngoncedo lwe-FYI
Ngelixa bekukho amaxesha angonwabisiyo kumdlalo, u-Bowlus wabelane ukuba akazukusika namnye kubo. Ukwazi ukubukela ngokwembono eyahlukileyo kuyathobisa, uvumile. Ubona okulungileyo, okubi, kwaye ufunda kuloo nto. Ukusika indawo kunokuphazamisa kuhambo kwaye ngekhe kulunge kwibali lethu.
Njengokuba ukuhlala ngokuxhalaba ngexesha langempela kwakungonelanga, uB Bowlus ubukele umboniso ukuze ufunde ngakumbi ngaye. Kuyinto engaqhelekanga kunye ne-surreal ukuzibona kumabonwakude, kodwa ndonwabile ukuba olu hambo lubanjiwe ukuze nabanye bafunde kulo, wavuma. Ukubukela iziqendu nabahlobo kube kuhle. Bebeyinethiwekhi yam yenkxaso kuyo yonke kwaye bayaqhubeka nokwenza njalo. Ndijonge ukubukela isiqendu esilandelayo nomama wam, umakhulu wam kunye nomninawa wam.
Ngaphandle kwayo yonke into u-Bowlus ebegqithile ngexesha le Ukutshata ekuboneni kokuqala Inkqubo, akazisoli ngayo nayiphi na. Inani elipheleleyo lokukhula kunye nolwazi olufumanayo malunga nesiqu sakho nangomtshato alunakulinganiswa xa kuthelekiswa nokuba sesichengeni kokuzibeka esichengeni, wabelana. Asimnqweneleli nto ngaphandle kolonwabo, kwaye asinakulinda ukubona ukuba le nto ishiyekileyo kulo lonke ixesha lonyaka!
Ukuba uphose nayiphi na Iziqendu ezigcweleyo ye Ukutshata ekuboneni kokuqala , unokubamba nanini na kwiwebhusayithi yeFYI. Isiqendu esilandelayo sidlala ngoDisemba 22 ngentsimbi ye-9. I-EST kwi-FYI.
Silandele kwi-Instagram @theknotnews yeefoto zomtshato wentsholongwane.
Iindleko zokuqeshisa iimpahla zesinxibo samadoda
apho unxiba umsesane wesithembiso
othenga imitya yomtshato
igumbi lokuhlala eligudileyo
U-Lea Michele utyhila intle, Iinkcukacha ezitsha ezivela kuMtshato wakhe ophefumlelweyo woMculo
Isikhumbuzo sama-50 somtshato sinxiba ukubhiyozela isiqingatha senkulungwane yomtshato